Daawo Sawiro hordhac ah oo laga helay Qaraxa Muqdisho ka dhacay iyo burbur xoog leh oo.. - Caasimada Online
Home Warar Daawo Sawiro hordhac ah oo laga helay Qaraxa Muqdisho ka dhacay iyo...
Daawo Sawiro hordhac ah oo laga helay Qaraxa Muqdisho ka dhacay iyo burbur xoog leh oo..
Muqdisho (Caasimadda Online) – Qaraxa oo Jugtiisa laga Maqlay qeybo badan oo Kamid ah Degmooyinka Gobolka Banaadir ayaa si gaar ah uga dhacay Ka soo Horjeedka Hoteelka Wehliye ee Magaalada Muqdihso, Waxaana jira Khasaare isugu jira dhiamsho iyo dhaawac oo soo gaaray dadka Shacab ah oo isugu jira Kuwo ka shaaheynayay Maqaaxi ka soo horjeeda Hoteelka, Kuwo wadada ku lugeynayay iyo dad Mootooyin Bajaaj ah watay.
Qaraxa ayaa ahaa mid laga soo buuxiyay gaari,waxana wararka aan heleyno ay sheegayaan in Gariga ay eryanayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya balse markii uu marayay kas oo horjeedka hotelka wehliya uu qarxay.
Khasaaro dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaa qaraxaas ka dhashay,waxana dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay ay isugu jiraan kuwa Ganacsi ku leh Goobta uu qaarxa ka dhacay iyo kuwa saarnaa Gawaarida nooxa raaxada iyo kuwa dadweynaha Bii’elka loo yaqaano kuwaas oo Wadada isticmaalayay.
Goobjoogayaal ayaa sheegaya in qaraxa uu dhacay, xilli wadada aheyd mid mashquul ah oo ay gaadiid kala duwan marayeen.
Gaadiidka Gurmadka degdega ee Aamin Ambulance ayaa soo sheegaya inay arkeen dhimashada 16, halka dhaawaca afar kalena ka qaadeen goobta.
Wararka ayaa intaa ku daraya in laga yaabo in khasaaraha intaas ka badna, maadaama xilli hore ay tahay.